အရှင်အာနန်ဒါ Rev Lustig က ဘာသာပြန်တဲ့မြန်မာကဗျာ – ၆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အရှင်အာနန်ဒါ Rev Lustig က ဘာသာပြန်တဲ့မြန်မာကဗျာ – ၆
အရှင်အာနန်ဒါ Rev Lustig က ဘာသာပြန်တဲ့မြန်မာကဗျာ – ၆
Posted by Kyaemon on Jul 9, 2013 in Arts & Humanities, Cultures, Education, Entertainment, Literature/Books, Photography, Poetry, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |5comments
Myanmar Poems Poetry Rev Friedrich V Lustig Translation
ဦးကြင်ဥ ရဲ့ပါပဟိန်ပြဇာတ်က ကဗျာ တပုဒ် ပါ၊
ဇာတ်လမ်းအရ ညီတော်မင်းသား ပါပဟိန်က
နောင်တော်အိမ်ရှေ့မင်းသား ဇယျာသိန် အား
စစ်ထိုးတိုက်ခိုက်ဘို့ ပြင်ဆင်ရင်း ထုတ်ဖော်တဲ့စစ်ချီကဗျာပါ၊
Naratheinkha – Wikipedia, the free encyclopedia
နောင်တော် နရသိံခ မင်းယုတ်မာက စီစဉ်နေကြောင်း
ညီတော်နရပတိစည်သူက သတင်းရတာနဲ့လက်ရုံးတော် အောင်စွာ
(အောက်ပုံ) ကိုစစ်သား ၈ဝ နဲ့စေလွှတ်ပြီး နောင်တော်ဘုရင်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနန်းလုတာ
Commander Aung Zwa
Naratheinkha came to power in 1171 after his father was killed by the assassins sent by the king of Pateikkaya, an Indian kingdom in the west. At accession, he made his brother Narapatisithu the heir apparent and commander in chief. This wasasignificant change because it was the first recorded instance in the history of the dynasty that the king had given up the command of the army. Evenaweak king like Sawlu never gave up the command.[note 2]
The new king was popular but his downfall soon came, according to the chronicles, due to his interest in Weluwaddy,aqueen of Narapatisithu. The king actually passed over marrying her but regretted the decision later after his brother took her. In 1174, Naratheinkha made up an excuse to send Narapatisithu to the front in the far north at Ngasaunggyan (present-day Yunnan) to suppressasupposed rebellion. When he had confirmed that Narapatisithu’s army was atadistant fort, the king raised his sister-in-law to queen.
On his way to the frontier, Narapatisithu got hold of the news byamessenger on horseback.[note 3] Knowing he had been misled, Narapatisithu then selected Aung Zwa,acommander from his army, to lead the effort to assassinate the king. Aung Zwa ledateam of 80 soldiers, and sped down the river by boat without pause. At Pagan, the team infiltrated the palace, and Aung Zwa himself killed the king.
မဟုတ်တရုတ် ဝသဗုံ ကြေးမုံဂျီး ….. ဒီအချိန်ဟာ ကလောင်သွေးရမည့် အချိန်မဟုတ်… ဝနယ်မြေ ခြံစည်းရိုး လုံအောင် စောင့်ရမည့်အချိန် ဖြစ်အိ… မြန်မာ့တပ်မဒေါ် ဗိုလ်ချုပ်ကြောင်ကြီး ဝင်စီးမည်ကို မကြောက်မဝံ့ ရှိသလော…. အခြစ်နှင့်စစ်တွင် ဥပဒေမရှိ … ကြေးမုံဂျီးအား ဖမ်းပစ်မည်သာတီး….
အဲဒီ ဝေဠုဝတီ ဇာတ်လမ်းကို မူကွဲအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖတ်ဖူးတယ်။
ကြေးမုံ ရေးတဲ့ အရှင်အာနန္ဒာဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာတွေကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါးမို့ တော်ရုံဖတ်ရဖို့ ခက်တာတွေမို့ ကြိုက်လည်း ကြိုက်တယ်။
တခါမှ မမန့်ရသေးလို့ မန့်လိုက်တာ။
ရှေး ကဗျာတွေ ဖတ်ရတာ
မအူပင်အောင်ဟိတ်ရွာက.. သူင်္ကြီး နာမည်နဲ ့.. တူသားးးး